चिन र जापान पछि अब फिनल्यान्ड, इन्डोनेशिया, रुस र अस्ष्ट्रेलियासँग हवाई सम्झौता हुने – Etajakhabar
चिन र जापान पछि अब फिनल्यान्ड, इन्डोनेशिया, रुस र अस्ष्ट्रेलियासँग हवाई सम्झौता हुने
काठमाडौं । सरकारले थप चार देश फिनल्यान्ड, इन्डोनेशिया, रूस र अस्ट्रेलियासँग हवाई सम्झौताको तयारी गरेको छ । हालसम्म नेपालको ३९ देशसँग हवाई सम्झौता भइसकेको छ । सम्झौताको तयारी गरिएका देशमध्ये फिनल्यान्ड आफैले नेपालसँग हवाई सम्झौताका लागि रुचि देखाएको हो भने अन्य मुलुकसँग नेपालले चासो बढाएको पर्यटन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यी मुलुकमध्ये रूस पहिले सम्झौता तथा उडान समेत भएको तर हाल उडान बन्द भएको मुलुक र अन्य मुलुक नयाँ हुन् ।
नेपालसँग हवाई सम्झौता गर्नेे कम्बोडिया ३९ औं देश हो । सरकारले २०७५ मङ्सिर १४ गते पछिल्लोपटक कम्बोडियासँग हवाई सम्झौता गरेको थियो । २०७५ मङ्सिरमै थाइल्यान्ड र जापानसँग हवाई सम्झौताको नवीकरण गरेको थियो । यस्तै नेपाल र चीनबीच गत साउन ९ र १० गते हवाई सेवा सम्झौता पुनरवलोकन भएको छ । चीनको राजधानीमा भएको द्विपक्षीय वार्तामा सातामा ७० उडान गर्न पाउने प्रावधानमा थप गरी ९८ पुर्‍याइएको छ ।
नेपालले आशियान क्षेत्रमा इन्डोनेशियासँग मात्र सम्झौता गर्न बाँकी रहेकोले ऊसँग सम्झौता भएमा अस्ट्रेलियाका लागि उडान रूट सहज हुने मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यले जानकारी दिए । ‘यो क्षेत्रमा इन्डोनेशिया बाहेक सबै मुलुकसँग सम्झौता भएको छ । अहिले वार्षिक ५० हजारभन्दा बढी नेपाली इन्डोनेशिया जाने गरेको र १५ हजार जति इन्डोनेशियाली नेपाल आउने गरेको तथ्याङ्क देखिन्छ । यसैले पनि यो मुलुकसँगको सम्झौताका लागि पहल भएको हो,’ आचार्यले भने । पछिल्लो समय नेपाली घुम्न तथा हनिमुन मनाउन इन्डोनेशिया जाने क्रम बढ्दै गएको छ । यो समाचार आर्थिक अभियानमा टीपी भुसालले लेखेका छन् ।
Posted on: Sunday, September 8, 2019 Time: 8:02:27
पश्चिमी वायुको प्रभाव, पछिल्लो दिन दिन मुलुकका यि स्थानमा हुन्छ वर्षा
सुनको मुल्य इतिहाँसमै पहिलोपटक भयो यति महङ्गो ! भयो भाउको नयाँ रेकर्ड !
-7824 second ago
-7333 second ago
-6746 second ago
-5373 second ago
-1497 second ago